အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ လမ်းခွဲပြတ်စဲကြတဲ့အခါ... - For her Myanmar
သမီးရည်းစားပြတ်တာထက် ပိုနာကျင်ရတာမျိုး.. ခံစားဖူးမှ သိနိုင်မှာပါ :'(
ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုခင်တဲ့သူ ကိုယ်ကခင်တဲ့သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းအတွင်းကျကျသိတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက် best friend/ close friend တွေကတော့ များများစားစား ရှိခဲပါတယ်။ အတူသွား အတူလာ အတူစားပျော်ပါးခဲ့ကြရာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အချစ်ဆုံးမှသည် မခေါ်မပြောအဆင့်ကို ရောက်ရှိကြတဲ့အခါမှာ….
သိပ်ကိုဝမ်းနည်းနှမြောစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။ ချစ်သူ ရည်းစားပြတ်စဲတာထက် အဆပေါင်းများစွာ နာကျင်ရပါတယ်… ဘာလို့လဲ???
၁) BFF တွေနဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီး အတူရှိခဲ့တယ်။
သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ရာသီဥတုတွေက လက်ချိုးရေလို့တောင် မရပါဘူး။ အတူရှိလာတာနဲ့အမျှ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်းဆိုတာ အချင်းချင်း ဖွင့်ပြောစရာမလိုလောက်အောင် အတွင်းကျကျ သိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့် အတွင်းသိ အစင်းသိတစ်ယောက် ဘဝထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီးက အခါခါနာကျင်စေလို့ပါ။
၂) အမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။
ချစ်သူရည်းစားဘဝမှာရှိတဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့ best friend တွေနဲ့ အတူရှိချိန် အမှတ်တရတွေက ဘယ်တော့မှ ယှဉ်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲ သိနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ စကားဝှက်တွေနဲ့ အမှတ်တရတွေက အတူရှိဖူးတဲ့နေရာတွေရောက်တိုင်း ပြန်လည် အမှတ်ရနေစေလို့ပါ။
၃) ပျော်ရွှင်စရာတိုင်း ဝမ်းနည်းစရာတိုင်း သူနဲ့အတူမျှဝေခဲ့တယ်။
အတူရှိချိ်န်က ကိုယ့်မှာပျော်ရွှင်စရာတွေရှိလာတိုင်းလည်း သူ့ကိုအရင်သတိရသလို ဝမ်းနည်းစရာတွေဆိုရင်လည်း သူ့ကို အရင် ရင်ဖွင့်လိုက်ရမှမလား? ခုတော့ ကိုယ့်မှာ ဒီလိုကိစ္စတွေရှိလာတိုင်း သူ့ကို ငါ သွားပြောသင့်ရဲ့လား? သူ ငါနဲ့အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေက အကြိမ်ကြိမ် ဝေခွဲရခက်စေလို့ပါ။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ် သိလိုပါက >>> http://bit.ly/2WK7oFQ
၄) ကိုယ့်ကို ဘယ်တော့မှ ထားမသွားနိုင်ဘူးလို့ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။
သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိ သည်းခံနားလည်ခြင်းတွေနဲ့ပဲ ခရီးဆက်ခဲ့တဲ့ friendship တစ်ခုဟာ ဘယ်တော့မှ ပျက်သုဉ်းမသွားတော့ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကြောင့်လည်း ပိုနာကျင်ရပါတယ်။
Related Article >>> အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ယောက်ျားလေးဖြစ်နေသော်…
၅) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ လွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့ best friend တစ်ယောက်ရဖို့ ခက်ခဲလို့ပါ။
ဘဝမှာ ကိုယ့်ကို သေချာပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့ best friend နောက်တစ်ယောက်ကို နောက်တစ်ခေါက်ရဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်ကူတာ ယောင်းတို့လည်း နားလည်မှာပါနော်။
စိတ်တွေ အရမ်းရှုပ်လာတဲ့အချိန်၊ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ဝန်းရံလာတဲ့အချိန်၊ ပျော်စရာတွေတွေ့လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ သူ့ကိုလွမ်းလို့ အရာအားလုံး တစ်ကပြန်စ ပြဿနာတွေအားလုံး မဖြစ်ခဲ့သလိုနေချင်မိမှာ အမှန်ပဲနော်…
အကြံပေးချင်တာကတော့ စွန့်လွှတ်နိုင်ရင် စွန့်လွှတ် မစွန့်လွှတ်နိုင်ရင် ခွင့်လွှတ်ဆိုတာလေးပါပဲ… ချစ်ရတဲ့ ယောင်းတို့လည်း ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ Bff တွေနဲ့အတူ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ တစ်သက်တာခင်မင်နိုင်သွားကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း….
Thu (For Her Myanmar)
သမီးရညျးစားပွတျတာထကျ ပိုနာကငျြရတာမြိုး.. ခံစားဖူးမှ သိနိုငျမှာပါ :'(
ဘဝမှာ ကိုယျ့ကိုခငျတဲ့သူ ကိုယျကခငျတဲ့သူ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ အမြားကွီးရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့အကွောငျးအတှငျးကကြသြိတဲ့ သူငယျခငျြးအရငျးခေါကျခေါကျ best friend/ close friend တှကေတော့ မြားမြားစားစား ရှိခဲပါတယျ။ အတူသှား အတူလာ အတူစားပြျောပါးခဲ့ကွရာက အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အခဈြဆုံးမှသညျ မချေါမပွောအဆငျ့ကို ရောကျရှိကွတဲ့အခါမှာ….
သိပျကိုဝမျးနညျးနှမွောစရာကောငျးတဲ့ ဖွဈရပျပါ။ ခဈြသူ ရညျးစားပွတျစဲတာထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ နာကငျြရပါတယျ… ဘာလို့လဲ???
၁) BFF တှနေဲ့ အခြိနျတှအေကွာကွီး အတူရှိခဲ့တယျ။
သူနဲ့ကိုယျနဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အခြိနျတှေ ရာသီဥတုတှကေ လကျခြိုးရလေို့တောငျ မရပါဘူး။ အတူရှိလာတာနဲ့အမြှ သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျးဆိုတာ အခငျြးခငျြး ဖှငျ့ပွောစရာမလိုလောကျအောငျ အတှငျးကကြ သိနကွေတဲ့အတှကျကွောငျ့ အတှငျးသိ အစငျးသိတဈယောကျ ဘဝထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြကွီးက အခါခါနာကငျြစလေို့ပါ။
၂) အမှတျတရတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့တယျ။
ခဈြသူရညျးစားဘဝမှာရှိတဲ့ အမှတျတရတှနေဲ့ best friend တှနေဲ့ အတူရှိခြိနျ အမှတျတရတှကေ ဘယျတော့မှ ယှဉျလို့မရပါဘူး။ ဘယျတော့မှလညျး ပွနျမရနိုငျတော့ပါဘူး။ သူနဲ့ကိုယျနဲ့ပဲ သိနိုငျတဲ့ ဖွဈရပျတှေ၊ စကားဝှကျတှနေဲ့ အမှတျတရတှကေ အတူရှိဖူးတဲ့နရောတှရေောကျတိုငျး ပွနျလညျ အမှတျရနစေလေို့ပါ။
၃) ပြျောရှငျစရာတိုငျး ဝမျးနညျးစရာတိုငျး သူနဲ့အတူမြှဝခေဲ့တယျ။
အတူရှိခြိနျက ကိုယျ့မှာပြျောရှငျစရာတှရှေိလာတိုငျးလညျး သူ့ကိုအရငျသတိရသလို ဝမျးနညျးစရာတှဆေိုရငျလညျး သူ့ကို အရငျ ရငျဖှငျ့လိုကျရမှမလား? ခုတော့ ကိုယျ့မှာ ဒီလိုကိစ်စတှရှေိလာတိုငျး သူ့ကို ငါ သှားပွောသငျ့ရဲ့လား? သူ ငါနဲ့အရငျလို မဟုတျတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ အတှေးတှကေ အကွိမျကွိမျ ဝခှေဲရခကျစလေို့ပါ။
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျ သိလိုပါက >>> http://bit.ly/2WK7oFQ
၄) ကိုယျ့ကို ဘယျတော့မှ ထားမသှားနိုငျဘူးလို့ တဈထဈခြ ယုံကွညျခဲ့တယျ။
သူနဲ့ ကိုယျနဲ့ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျသိ သညျးခံနားလညျခွငျးတှနေဲ့ပဲ ခရီးဆကျခဲ့တဲ့ friendship တဈခုဟာ ဘယျတော့မှ ပကျြသုဉျးမသှားတော့ဘူးလို့ ထငျခဲ့တဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အတ်တတှကွေောငျ့လညျး ပိုနာကငျြရပါတယျ။
Related Article >>> အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးက ယောကျြားလေးဖွဈနသေျော…
၅) မိတျဆှသေူငယျခငျြးဖွဈဖို့ လှယျကူနိုငျပမေဲ့ best friend တဈယောကျရဖို့ ခကျခဲလို့ပါ။
ဘဝမှာ ကိုယျ့ကို သခြောပေါကျနားလညျနိုငျတဲ့ best friend နောကျတဈယောကျကို နောကျတဈခေါကျရဖို့ဆိုတာ တျောတျောမလှယျကူတာ ယောငျးတို့လညျး နားလညျမှာပါနျော။
စိတျတှေ အရမျးရှုပျလာတဲ့အခြိနျ၊ ဝမျးနညျးမှုတှေ ဝနျးရံလာတဲ့အခြိနျ၊ ပြျောစရာတှတှေလေ့ာတဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ သူ့ကိုလှမျးလို့ အရာအားလုံး တဈကပွနျစ ပွဿနာတှအေားလုံး မဖွဈခဲ့သလိုနခေငျြမိမှာ အမှနျပဲနျော…
အကွံပေးခငျြတာကတော့ စှနျ့လှတျနိုငျရငျ စှနျ့လှတျ မစှနျ့လှတျနိုငျရငျ ခှငျ့လှတျဆိုတာလေးပါပဲ… ခဈြရတဲ့ ယောငျးတို့လညျး ကိုယျခဈြရတဲ့ Bff တှနေဲ့အတူ နားလညျမှုရှိရှိနဲ့ တဈသကျတာခငျမငျနိုငျသှားကွပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး….
Tags: bff, Brake, break, Break up, Friendship, Hurt, love
ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ခရီးတစ်ခုရဲ့ ရင်ခုန်သံ (၂)
Thu January 23, 2018
သူငယ်ချင်းနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါ အခင်အမင်မပျက် စီးပွားလည်းတက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း(၄)ခု
စတွေ့တွေ့ချင်း လူတစ်ယောက်နဲ့ ချက်ချင်းကို ရင်းနှီးသွားအောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ?
သူငယျခငျြးအရငျးခေါကျခေါကျက စနိုကျကြျော ဖွဈနတေဲ့အခါ
Christina Rosy May 31, 2019
အလုပ်များတဲ့မေမေတို့ သားသားမီးမီးတွေအတွက် အဖိုးတန်အချိန်တွေ ဘယ်လိုပေးမလဲ ?
Yin Sandi Ko May 28, 2019